Plastiki bhegi kugadzira muchina Vagadziri - China Plastic bhegi kugadzira muchina Vatengesi & Fekitori
upg-900 kutakura bhegi mugadziri
Plastiki bhegi yekugadzira muchina yakakosha dhizaini yekuisa silting uye kuisa chisimbiso, 1 pcs hombe jambo roll roll uye kucheka kuita maviri madiki rolls mune yekumhanyisa kugadzirwa. 2 makomputa akazvimirira anodzora dhizaini uye anotyairwa ne5.5KW servo mota. Takura bhegi gadzira zvakare Inokodzera kugadzira mapurasitiki anoraswa T-shirt mabhegi.
Unwinder kutanga, wobva watsemura uye unama, kupisa kupisa uye kucheka kupisa, kurova pakupedzisira. Plastiki bhegi yekugadzira muchina inogona kuita mitsara miviri uye mitsara mina yeiyi divi gusset T-shati inotakura bhegi inogadzira. Plastiki bhegi kugadzira muchina inogona kumhanya kweanopfuura 200pcs paminiti. Plastiki bhegi yekugadzira muchina inokodzera kune zvakanyanya musika odha zvinodiwa.
Amai Rova Hupamhi
100-230pcs / min X2 Mitsara
Gadza Line Speed
Firimu Unwind Dhayamita
Lq-300 × 4 diki epurasitiki bhegi muchina
Plastiki bhegi yekugadzira muchina yakanyatso dhizaini yemitsetse ina kumhanya diki T-shati bhegi kugadzirwa. Kana bhegi upamhi pamusoro pe250mm, Plastiki bhegi kugadzira muchina inogona kuburitsa mitsara miviri kugadzira hombe mabhegi.
Plastiki bhegi inogadzira muchina ine maviri seti emavara mafotocell ekuteedzera akadhindwa mabhegi. Mitsara mina kana mitsara miviri yekuisa chisimbiso uye kucheka kuri kushanda sychronously. Mushini unoshandisa maviri seti mashanu ematani hydralic masilinda kubaya mabhegi muT-shati chimiro nemubato.
Plastiki bhegi yekugadzira muchina yakakodzera kuburitsa madiki epurasitiki T-shati bags mukugadzira vhoriyamu uye kushanda kwakagadzikana.
upgv fekitori yakanaka pakuisa chisimbiso uye kupisa kutema epurasitiki bhegi muchina kugadzira.
Mitsara / Mitsara miviri
170mm - 250 mm mitsara mina
250mm - 520mm yemitsetse miviri
10-55 micron padenga
160-220pcs / min * 4 Mitsara
Lq-450X2 biodegradable mabhegi muchina
Muchina uyu mitsara miviri kupisa chisimbiso uye kupisa kwekucheka dhizaini, ayo ari sutu yekudhindwa bhegi uye isina-kudhindwa bhegi kugadzirwa. Izvo zvinhu zvehombodo iyo muchina unogona kugadzira iHDPE, LDPE uye zvishandise zvakare zvinhu uye mafirimu ane mafirita uye anogadziriswa mafirimu. LQ-450X2 inonyanya kugadzirirwa mitsara miviri yekumhanyisa T-hembe bhegi kugadzirwa. Muchina unogadzirirwa nemaviri akazvimirira makomputa ekugadzirisa dhizaini uye inotungamirwa nekaviri 4.4 kw servo motors. Muchina unogona kuvhara nekucheka biodegradable plastiki firimu uye compostable firimu.
Muchina wakakodzera kuburitsa mapurasitiki T-shirt mabhegi mukumhanyisa uye kushanda kwakagadzikana kwemaawa makumi maviri nemana.
30% dhipoziti neT / T kana uchisimbisa iyo odha
70% chiyero neT / T isati yatumirwa.
Kana isingachinjiki L / C pakuona
100-300pcs / min X 1 Mutsara
upg-700 eco hushamwari bhegi kugadzira muchina
upg-700 muchina uri pazasi chisimbiso perforation bhegi muchina. Mushini une mbiri dzakapetwa katatu V-fold zvikamu, uye firimu inogona kupetwa kamwe kana kaviri. Chinhu chakanakisa ndechekuti chinzvimbo chepatatu peta chinogona kugadziridzwa. Muchina dhizaini yekuisa chisimbiso uye kupora pekutanga, wozopeta nekudzosera kumashure mune yekupedzisira. Kaviri zvakapetwa V-folds ichaita firimu diki uye yepasi chisimbiso.
Muchina uyu firimu kusunungura kutanga, wozoisa chisimbiso uye kupora kutanga, kozoti V- kupeta uye kudzorerazve mune yekupedzisira. Bottom chisimbiso bhegi pamusoro mupumburu coreless. Muchina unogona kuita hwakawanda hukobvu eco hushamwari mabhegi kusangana nezvinodiwa mumusika.
Unwinder Firimu Hupamhi
Max. Rewinder bhegi Upamhi
7-35 micron padenga
UPG-300X2 biodegradable bhegi kugadzira muchina
Muchina uyu unodziisa kupisa uye kuputika kwehomwe kudzoreredza, inova sutu yekudhinda uye isiri-yekudhinda bhegi kugadzira. Izvo zvinhu zvehombodo firimu inogadziriswa, LDPE, HDPE uye zvishandiso zvekare.
UPG-300X2 inogona kugadzira mabhegi emarara mune inobudirira kugadzira nekungochinja mapurasitiki. Muchina unogadzirira maviri seti emhando yepamusoro emagetsi cretive sensor zvishandiso izvo zvinogona kuita mutikitivha nzvimbo chaiyo yekutyora iyo firimu uye nekugadzira iwo mavhoriyamu muinotora nhamba.
Mushini wakakodzera kugadzirwa kwevhoriyamu kune madiki masaga mabhegi ayo upamhi hwudiki pane 250mm. Muchina bhegi unogadzira maitiro ndeye firimu unewind kutanga, wobva wavhara uye wozadza uye wadzosera kumashure mune yekupedzisira.
Firimu kusunungura, wozoisa chisimbiso uye kusimbisa, dzosera kumashure mune yekupedzisira
Bhegi Roll Hupamhi
100 mamirimita - 250 mm
upg-450X2 bhegi pane rwakapetwa kugadzira muchina
upg-450X2 inogadzirirwa bhegi-pa-roll mabhegi ane bepa kana PVC yakakosha kugadzirwa. Zviri otomatiki firimu-kuzorora uye yepakati-shanduko mabasa anobatsira mabhegi vatengesi kuvandudza bhagi kugadzira kugona uye kudzikisa simba uye murume simba zvakanyanya. Yayo mbiri servo motors inodzora system inoita kuti kugadzirwa kugadzikane. Ndiyo sarudzo yakanakisa yekugadzira pasi mabhegi akadhindwa mabhegi uye mabhegi asina chinhu.
upg yakagadzira iyi modhi yebhegi pane roll yekugadzira muchina inonyanya kugamuchirwa nevatengi uye inogadzira bhegi iri pamabhegi emipumburu inoenderana nezvinodiwa mumusika. Yakazara otomatiki bhegi rinotenderera kugadzirwa kunowedzera kugona. Izvo zvinobatsira kuwana mamwe maodha ekuisimbisa uye kudzoreredza mhedzisiro, yakasimba uye zvakarongeka.
Ukoshi hweKuteerera: Kusvikira makumi matatuth Gumiguru. 2021
200 mamirimita - 400 mm
300 mamirimita - 600 mm
LQD-600C Mativi-matatu Kuisa Chisimbiso Otomatiki Bhegi Kugadzira Machine
Technical parameter Maitiro: matatu ekuisa chisimbiso, manomwe servos, mana kudyisa, main muchina servo, inofambiswa yakapetwa kaviri. Iine ultrasonic mudziyo. Raw zvinhu: BOPP, CPP, PET, NYLON, epurasitiki laminated firimu, multiplayer extrusion yakaridzwa firimu, pure aruminiyamu, aluminium-yakanamirwa pamifananidzo yakaomeswa firimu, pepa-epurasitiki laminated firimu 3.Max. bhegi inogadzira kumhanya: 180 nguva / min Yakajairwa kumhanya: 120time / min (matatu mativi chisimbiso 100-200mm) 4. Max. zvinhu kunze kwemutsetse wekumhanyisa kumhanya: ≤35 m / min 5. Saizi yesaga: Hupamhi: 80-580 mm Le ...
LQBQ Series Side Chisimbiso Heat Kucheka Bhegi Kugadzira Machine
Tsananguro Yezvechigadzirwa Iwo mabhegi edivi emadziro akasiyana nemabhegi ezasi ezasi uye mabhegi enyeredzi, yakasimbiswa pakureba, ichivhura pahupamhi. Saka zvinogoneka kugadzira masaga ekuzvinamatira, dhonza-tambo mabhegi ... Rutivi chisimbiso bhegi kugadzira muchina unogona kugadzira izvo zvekutakura zvekudya mabhegi semabhegi ekubheka, iwo maindasitiri achishandisa mabhegi semabhegi ekutakura, grament kurongedza mabhegi uye zvichingodaro. uchishandisa servo mota kudyisa firimu, bhandi rekufambisa kutakura mabhegi. EPC, interter, humburumbira zvese zviri ...